Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » साउदीमा श्रीमान हराएकी पूजा भन्छिन : उनको सम्झनामा कती रातहरु रोएरै बित्छ
साउदीमा श्रीमान हराएकी पूजा भन्छिन : उनको सम्झनामा कती रातहरु रोएरै बित्छ
मंसिर ३०,काठमाडौं । गोरखाकी पुजा गुरुङको साउदी पुगेका उनका श्रीमान गणेश गुरूङ ३ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन् ।
६ महिनासम्म गणेश फोन गर्दै थिए, कमाइ राम्रो नभएको गुनासो सुनाउँथे । केही पैसा पठाएका पनि थिए । तर, एकाएक उनी सम्पर्कबाट बाहिर भए ।
‘दुर्घटनामा परेर मर्‍यो भन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो होइन होला, कतै अप्ठेरोमा परेका होलान् ।’
पुजा र उनका परिवारलाई लाग्छ, मरेको भए कतै त लास भेटिन्थ्यो होला नि !
उनलाई पनि आफ्नो जीवनसाथीको साथ विना पल–पल काट्न कम्ता मुस्किल भएको छैन । तर, पुजालाई थाहा छ, जति पीडा भए पनि सहनुको विकल्प छैन ।
पुजा आफ्नो मनको पीडा लुकाएर पनि हाँस्ने कोसिस गर्छिन् । फेरि पनि जब गणेश सम्झनामा आउँछन् आँखा त छचल्किन्छ नै । भक्कानो फुट्छ नै रातहरु रोएरै सकिन्छ । काँखमा जब लुटपुटिँदै अवोध सन्तानले ‘बाबा कहिले आउने भनेर ?’ सोध्छन् , पुजाले के जवाफ दिनु ?
पुजाको जस्तो कथा अहिले धेरै परिवारले भगिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरु विभिन्न कारणले सम्पर्कविहीन हुने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दो छ । तर, यस्ता विदेशमा बेपत्ता कामदार कति छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन ।
पीएनसीसीका अनुसार बितेको ६ वर्षमा संस्थामा मात्रै ३ सय ८८ वटा यस्तै प्रकृतिका विदेश पुगेका व्यक्ति बेपत्ता भएको भन्दै खोजतलासको निवेदन दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये धेरै मुद्दा मलेसियाका थिए । संस्थाले २३१ जना कामदारको अवस्था पत्ता लगायो । त्यसमध्ये कतिलाई फर्काएर पारिवारिक पुर्नमिलन गराइयो भने कतिलाई फर्काउन नै नसकिएको संस्थाकी कार्यक्रम अधिकृत शान्ति सिंह बताउँछन् ।
१०४ वटा निवेदन अनुसार व्यक्तिको खोजतलास भइरहेको तरे ५७ वटा निवेदन भने अघि बढाउन नसकिएको उनले बताइन् ।